Monday, 11 Sep, 2017 4:04 PM
२६ भदौ, काठमाडौं । १८ वर्षीया लिलियन कान्स्टेन्टिन अहिले विश्वभर चर्चामा छिन् । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले उनको एउटा निर्मम अनुभव​ समेटेर समाचार प्रकाशन गरिरहेका छन् । एक वर्षअघि आफू बलात्कृत हुँदाको घटना मोबाइलमा रेकर्ड गरेकी लिलियनको अनुभव यतिखेर भाइरल भइरहेको छ । इंगल्याण्डको केन्स सिटीकी उनले आफू बलात्कृत हुँदाको घटना रेकर्ड गरेपछि प्रहरीले त्यसैको आधारमा अनुसन्धान चलायो । र, दोषिलाई कैद पनि गरिसकेको छ । त्यो रेकर्ड टेप २ मिनेट ४७ सकेण्डको थियो । डेली मेललाई उनले सुनाएको अनुभव यस्तो छ :
एक वर्ष अघि मलाई एक अन्जान व्यक्तिले बलात्कार गर्यो । त्यतिबेला म १८ बर्षकी थिएँ । म घरबाट केलब ६० सकेण्डको दुरीमा थिएँ । त्यतिबेला घोर अन्धकार थियो । घटनाको बेला मैले आफ्नो मोबाइल फोनको रेकर्ड बटन दबाइदिएँ ।
मैले यो सोँचेकी थिएँ, त्यो लाइटलाई नोटिस गरेपछि ऊ रोकिन्छ । जोडले चिच्याइरहेकी पनि थिएँ । म जोरसँग भनिरहेकी थिएँ कि सबै रेकर्ड गरीरहेकी छु । तिमी चुपचाप निस्किन सक्दैनौ ।
तर, उसले केही पनि सुनेन । मलाई जमिनमा पछार्यो । अनि, बलात्कार गर्यो । घटना भएको लामो समय भएको छैन । तर, लाग्छ, सबैकुरा अन्त्य भइसकेको छ ।
म बलात्कृत हुँदा घरको नजिकै थिएँ । दौडिँदै घरमा गएँ । अनि, परिवारलाई सब कुरा बताएँ । घरपरिवारले पुलिस बोलाए । प्रहरीले मलाई नुहाउन र ब्रश गर्नबाट रोके । फोहोर महशुस भइरहेको अवस्थामा नुहाउन नदिँदा मलाई अचम्म लागिरहेको थियो ।
त्यसपछि मलाई नजिकैको यौन शोषण रेफरल सेन्टरमा लगियो । त्यो, मेरो घरबाट ४५ मिनेटको दुरीमा थियो । त्यहाँ पुगेपछि मलाई केही पूर्व जानकारी गराईयो, ‘यहाँ तपाईंको शरीरको फोरेसिक जाँच हुन्छ । जाँच हुँदा तपाईं कपडाबिना हुनुपर्छ । तपाईंलाई मेटल बेडमा सुताइन्छ र कुनै लौरोजस्तो बस्तु तपाईंकौ योनीमा राखिन्छ । यो जाँचबाट चोट पत्ता लगाउन सकिन्छ ।’
सेन्टरमा रहेकी महिला धेरै मायालु थिइन् । उनी मेरो ट्याटुलाई लिएर कुरा गरिरहन्थिन् । उनीले मलाई पूर्ण रुपमा सुरक्षित भएको अनुभुति गराइन् ।
त्यहाँ मेरो एक एसटीआई, एक एआईवी अनि एक प्रेग्नेन्सी परीक्षण गरियो । त्यसपछि केही ट्याबलेट दिइयो । य औषधीहरु एचआइभीबाट बँच्नका लागि थियो । यी सबै औषधीहरु एक महिनासम्म दिनमा तीनपटक लिनुपर्ने थियो ।
यी औषधीहरु खाँदा मलाई बोमिटका साथै रिँगटा पनि लाग्थ्यो । म डाक्टरसँग चेक गर्नका लागि जान्थेँ । यस्तो अवस्थामा पूरै महिना नरमाइलो भयो । अनि, भारी मन । म एक सामान्य महिलाजस्तै पुलिस स्टेसन जान्थेँ ।
यो समयमा यस्तो लाग्थ्यो कि म एक ल्याबका लागि प्रयोग हुने मुसा हुँ । म गन्न सक्दिन, कतिपटक मैले डाक्टरलाई बलात्कारको कुरा भनेँ । एक पटक उनले बलात्कारको अन्तरंग विवरण नै मागे । उनले सोधे, ‘उसले तिम्रो स्कर्ट माथि सार्यो वा तल तान्यो । उसले यो साइडमा घोच्यो वा त्यो साइडमा ? मलाई यी प्रश्नहरुको आशा थिएन । म पागलजस्तै रोएकी थिएँ ।
मलाई लाग्यो, मैले आफुसँग यस्तो गर्न सक्दिनँ । एक समय त मैले मुद्धा नै फिर्ता लिने निर्णय पनि गरेकी थिएँ ।
म एक्लै छैन जसलाई यी कुराहरुको सामना गर्न परिरहेको छ । यस्ता मानिसहरु धेरै छन्, जोमाथि दुव्र्यवहार हुन्छ, तर उनीहरु केही पनि बोल्दैनन् । केबल १५ प्रतिशत बलात्कारपीडित मात्रै प्रहरीमा उजुरी गर्छन् । यसमा ५ दशमलब ७ प्रतिशत मानिसहरुले मात्रै न्याय पाउँछन् । मैले सोचेँ कि म ती व्यक्तिहरुमा एक बन्न सक्दिन ? मैले अहिलेसम्म यति किन गरेँ ?
जुन भिडियो मैले रेकर्ड गरेकी थिएँ, त्योबिन अपराधिलाई सायद कहिँ पनि खोज्न सकिँदैनथ्यो । यही भिडियोलाई सबुतको रुपमा प्रयोग गरियो । उसलाई दोषि ठहर गरियो र १३ वर्ष कैद भयो ।
म अदालतमा आफ्नो आमाको साथमा थिएँ । मेरो मुद्धा लड्नेहरु र अन्यले मेरो सहयोग गरे । म उनीहरुको अनुहारमा आनन्द देख्न सक्थेँ । महिनौको तनाव उनीहरुको अनुहारबाट अन्त्य भयो । हामी सबैलाई राम्रो लाग्यो । अब म आफ्नो जिन्दगीलाई यसबाट निकालेर अगाडी बढाउन सक्छु ।
केहि महिनापछि मैले युटुबमा एक भिडियो बनाएँ । त्यसको नाम हो, ‘ह्वाट यु डु नट टेल एबउट सेक्सुअल एजल्ट ?’ यो भिडियोमा यौन हिंसाको सामाना कसरी गर्ने भन्ने कुरा बताइएको छ । के गर्ने भन्ने कुरा पनि बताइएको छ ।
यसमा यो पनि जरुरी छ कि तपाईले के गर्नु पर्छ ? सबैभन्दा जरुरी कुरा तपाईं यस्तो समस्यबाटा कसरी उम्किन सक्नुहुन्छ ।